Indlela Save Money On zemininingwane Fares | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela > Indlela Save Money On zemininingwane Fares
(Kugcine ukubuyekezwa On: 11/12/2020)
Okuhambayo kuye ngamazwe, noma umuzi ngomuzi, kuyinto amazing ngempela futhi voyaging ngesitimela is eyodwa yezindlela ezingcono kakhulu zokwenza lokhu. isitimela European fares ngokuyinhloko ngokusebenzisa ibanga, Nokho, manje izinkampani eziningi European wesitimela baye bathuthela onamandla zamanani uhlelo - efana airfares - lapho yokugibela lingashintsha kuye ngokufunwa, imikhawulo, noma ekuseni indlela ukuthenga. Kungakhathaliseki ukuthi uhlela ukuya e-Austria, Belgium, Britain, France, Germany, or Italy, okuthize phambi yakho uhambo ngesitimela Kungenzeka ngempela ukusiza yokwelula ibhajethi yakho. Nazi amathiphu aphezulu ku indlela ulondoloze imali ezitimeleni zamanani ehlisiwe phakathi nohambo zakho.
Okuthunyelwe okwabiwe nguSave A Train (@saveatrain)
Uma itholakale, advance train tickets typically go on sale 6 izinyanga ngaphambi isikhathi ukuhamba. Nokho, ukubhuka ngisho nje kwamasonto ambalwa ngaphambi ayesengayigcina ukukusindisa isamba elanele imali, ngakho musa ukuchitha noma nini!
Vumelana nezimo ne isikhathi sonyaka ufuna ukuhamba
Ukuba nezimo nge uma ufuna ukuhamba kungaba ngokuvamile kuholele ukulondoloza okuhle. ithikithi zemininingwane amanani livele ezikhathini isiqongo samaholidi kwamanye amazwe aseYurophu. Lokhu ngokuvamile emhlabeni ihlobo izinyanga, ikakhulukazi July no-August.
Uma une inketho ukuhamba ngaphandle kwalezi izinyanga, the tickets can be much cheaper to purchase. Futhi, holiday times such as Christmas futhi Easter, are peak times – check when ngamalanga wamaholideyi lokha iinkolo kukhona futhi uzame ukugwema lezi.
WasePadua Venice Izitimela
Rebook ithikithi lakho – ulondoloze imali ezitimeleni zamanani ehlisiwe
Uke ibibhukelwe ithikithi isitimela kuphela ukubona ukuthi yokugibela lehla ngokushesha nje emva kokuba enziwe ukuthenga kwakho? Train ticket prices tend to fluctuate – ngokuvamile ngosuku olufanayo. Kuye inqubomgomo yokukhansela yenkampani, kufanele ngokujwayelekile ukwazi ukukhansela futhi kabusha ukubhuka isitimela sakho ngesilinganiso aphansi uma uthatha isinyathelo ngaphakathi 24 amahora ukuthenga kwakho yasekuqaleni.
EBordeaux kuya Biarritz Izitimela
Paris Biarritz Izitimela
Lyon ukuba Biarritz Izitimela
EMarseilles ukuze Biarritz Izitimela
Ezinye izinkampani isitimela ikhululekile kakhulu kunezinye nge yokukhansela zabo isikhathi. Kwezinye izimo, ungakhansela ithikithi lakho ngaphandle kwewindi angu-24. Kubalulekile hlola website yenkampani yakho ukufunda ini nezinqubomgomo zayo ngaphambi kokuthenga yelinye ithikithi. Qiniseka ukugcina afuna amanani entsha isitimela bese ugcine imali nge rebooking ithikithi lakho ngesilinganiso aphansi.
Nantes eBordeaux Izitimela
Paris Bordeaux Izitimela
EMarseilles eBordeaux Izitimela
Wasebenzise kahle amathuba ezingxoxo izaphulelo – Indlela ulondoloze imali ezitimeleni zamanani ehlisiwe
Abanye imizila isitimela European zinikeza izaphulelo abalulekile izingane, abafundi, futhi abahambi abadala. Izingane kusukela ngineminyaka emithathu ubudala kuya nanye ngokuvamile uthole iphesenti enhle, kuyilapho izingane ezingaphansi kweminyaka engu- 3 typically travel free. Students and senior discounts may be available depending on the trains and destination you are traveling to. Kubalulekile ukuba umfundi yakho noma ikhadi abaphezulu kuwe ngaso sonke isikhathi uma uthenga ithikithi ehlisiwe.
Kukhona inala fares ehlisiwe lutholakale ahlukene aseYurophu wesitimela amanethiwekhi. Qiniseka ukuthi njalo ukugcina aqaphe izaphulelo zakamuva ngokulandela yethu Facebook futhi Twitter Amakhasi.
Ucabanga ukuthatha Isitimela idolobha lakho ozithandayo European? Iya ku website yethu saveatrain.com ukuze uhlole zonke fares yethu kwekhethelo futhi uqale uhlela adventure wakho olandelayo!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhow-to-save-money-on-train-fares%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
savemoney Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Travelingtips traveltips
Ngingu ukusebenza kanzima kanye ngabanye abanothando asebeneminyaka eminingi isipiliyoni ezintweni zonke ukumaketha digital kanye nobudlelwano zomphakathi. Ngokuhamba inombolo lokugcina iminyaka, Ngibé amakhono ami endaweni ikhambo kanye ngakhoke waqala ukubhala okuqukethwe ukuze abantu bajabulele izwe lethu njengoba kuyilapho mina ngikhungathekile. - Ungakwazi uchofoze lapha ukuze ngithinte
Uhambo Olukhulu Lwesitimela lwaseYurophu Kwabaqalayo
Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba iBrithani, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Czech Republic, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuhamba Spain, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe
Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Isitimela Sokuvakasha eHungary, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Izikhangibavakashi Europe